सरकारले डण्डा चलाउँने भएपछि कामचोर कर्मचारीको भागाभाग! – All top Here
Home/समाचार/सरकारले डण्डा चलाउँने भएपछि कामचोर कर्मचारीको भागाभाग!
सरकारले डण्डा चलाउँने भएपछि कामचोर कर्मचारीको भागाभाग!
adminAugust 3, 2019
नेपाल सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । कर्मचारीको मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री पण्डितले कामचोर कर्मचारीको निद हराम बनाउँने अभिव्यक्ति दिएका छन् । मन्त्री पण्डितले दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई जागिरबाटै हात धुवाइदिने चेतवानी दिएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले कार्य क्षमताको अभाव भएका कर्मचारीलाई विदा गर्ने पनि स्पष्ट पारे। शुक्रबार मन्त्रालयद्धारा आयोजित वार्षिक कार्य प्रगति समिक्षात्मक बैठकमा बोल्दै उनले दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको छुट दिन नसकिनेतर्फ पनि सचेत गराए।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्य सम्पादन सम्झौंता गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पूरा हुने गरी काम गर्न पनि मातहतका कर्मचारीहरुलाई सचेत गराए। तोकिएको काम पूरा नभए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कडा कार्वाही हुने मन्त्री पण्डितको भनाई छ।
मन्त्री पण्डितले समायोजनामा गएका कर्मचारीहरुको तह र श्रेणीको तलवमा देखिएको समस्या एक हप्ता भित्र समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिए। उनले कर्मचारीहरुको सुविधामा कुनै समस्या नहुने तर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे कडा कार्वाही हुने पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री पण्डितले गत वर्ष आफ्नो मन्त्रालयले व्यवस्थाकीय काममा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने पनि बताए। कडा मन्त्रीको परिचय बनाएका लालवावुको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि कामचोर , ठग कर्मचारीहरुको सातो गएको बुझिएको छ ।
उत्तर कोरियाली शासक किमको ‘मृ त्युको समाचार बाहिरियो।।
फेरि चितवनमा आफ्नै भान्जाले ३७ वर्षीया माईजु भगाए (भिडियो)
मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश
संक्रमित युवककी पत्नीको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’, तर भाउजुलाई कोरोना सरेपछि परिवार अलमलमा
डेढ वर्षदेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी पुनः सुरु